Global Voices teny Malagasy » Mampandohalika An’i Jamaika Ilay Otrikaretina Tsikongonià · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 12 Oktobra 2014 20:01 GMT 1	 · Mpanoratra Janine Mendes-Franco Nandika Ntsoa
Sokajy: Karaiba, Jamaika, Fahasalamàna, Fanabeazana, Mediam-bahoaka, Politika, Tontolo_iainana
Ny moka Aedes aegypti, mpitondra ilay otrikaretina Tsikongonià. Sary an'i Marc AuMarc, nampiasaina miaraka amin'ny fanomezan-dàlana CC BY-NC-ND 2.0.
Aretina misoko manerana an'i Karaiba  amin'izao fotoana izao ny Tsikongonià, otrikaretina mahatonga fanaviana mahery vaika sy fanaintanan'ny vanin-taolana. Mifindra amin'ny alalan'ilay moka Aedes Aegypti  mpitondra azy ilay aretina, ary mitombo hatrany ireo tranga vaovao manerana ny faritra.
Raha i Jamaika manokana izao dia toa sahirana tsy mahafehy ny fiparitahan'ilay otrikaretina sy ny tsy fahafantarana ny momba ilay aretina . Nanamarina ny bilaogera iray, “Cucumber Juice “, fa nandray anjara tanatin'ny “fandringanan'ny Tsikongonià” ireo “olon-tsotra Jamaikana”, saingy kianiny ihany koa ny fomba fandraisana an-tanàna nataon'ny ministry ny fahasalamana an'ilay krizy, tonga hatrany amin'ny fanolorany hevitra azy hametra-pialàna mihitsy aza:
Tsy voafehy intsony ilay fanaviana Tsikongonià miparitaka be — aretina mandripaka io — ary asa maro no ilaina mba hifehezana ny zavatra rehetra. Tsy azo atokisana sy antenaina ho afaka hitarika ny asa tokony hovitaina intsony i Dr. Ferguson. […]
Maninona no hametra-pialàna? Satria, amin'izao, i Dr Ferguson no tarehin'ny tsy fahombiazan'ny fahasalamam-bahoaka sy ny Ministera izay rariny raha betsaka amin'ny vahoaka natao hotompoiny sy harovany no tsy mahatoky azy.
Notsindrian'ny bilaogera Alice Clare, fa “ny fanamaivanana sy ny fanabeazana” no tokony atao dingana manaraka, raha sady mamaly ny filàna maikan'ny firenena ihany: fanadiovana faobe ireo làlana manerana ny nosy, ireo fantsona sy tatatra, mba hialàna amin'ireo rano maloto miandrona izay hanatodizan'ireo moka. Manome hevitra ny mba hampianarana ireo mponina tena marefo momba ny fanangonan-drano madio sy ny fanariana izany ihany koa izy. Ny fanangonana ireo fako tsy azo antoka ihany koa dia vao mainka maharatsy ny toe-pahasalamana. Manantena i Clare fa, mety azo ampiasaina ho fantsona fampitam-baovao mahomby mba hanabeazana ny vahoaka ny mediam-bahoaka.
Nandroso hevitra i Charmaine Wright , mpampiasa twitter, fa mila manao izay tratrany amin'ny fanaparitahana ny vaovao ho tonga eny anaty vondrom-piarahamonina ireo tompon'andraikitry ny fahasalamana, mba hifandraisany amin'ireo olona, indrindra fa ireo izay tsy mahay mamaky teny sy manoratra ary ireo tsy afaka mampiasa ny aterineto. Nandroso hevitra izy fa ny mozika no hevitra mety indrindra mba hahombiazana amin'izany. Raha ny marina, efa manana hira momba ny Tsikongonià  i Jamaika.
Raha mampiasa ny tenifototra #chikungunya #caribbean  (#Tsikongonià #karaiba)  ireo mpampiasa Twitter, dia mizara vaovao mikasika ny fomba hanampian'ny fiovan'ny toetrandro ny fiparitahan'ilay aretina , momba ireo antotanisan'ireo matin'ny Tsikongonià isam-paritra , sy ireo zavatra maro hafa. Nangataka ny mpampiasa Twitter iray, Emma Lewis, monina ao Jamaika, hoe:
Tamin'ny Desambra 2013 no tranga voalohany indrindra tany #Karaiba !! (St Maarteen) #tsikongonià  #karaiba  Tsy nanam-potoana niomanana, nanabeazana ny vahoaka ve isika??
Nanontany ihany koa i Lewis raha hisy fiatraikany eo amin'ny politikan'ny governemanta Jamaikanina  ilay aretina. Nanamarika ny mpiray tanindrazana iray, Jan Voordouw:
Tratran'ny tampoka i #Jamaika : tsy fahampian'ireo fanafody sy ny fandaminana ny tsy fahatongavan'ny mpiasa – raha efa tara ao anatin'ilay ady amin'ny #Tsikongonià 
Manana fijery mahatsikaiky momba ny zava-mitrana ireo mpampiasa aterineto sasany:
DEET no rano manitra vaovao. #jamaika  #Tsikongonià 
GM tweeps! Oha-pitenenana androany: “Raha mieritreritra ianao fa kely loatra ka tsy hahavita na inona na inona, andramo ny matory miaraka amin'ny moka.” #Tsikongonià  #Jamaika 
Ny governemanta, anefa, tsy mandray izany ho zava-mitranga mampihomehy mihitsy. Niresaka tamin'ny vahoaka  momba ilay olan'ny fahasalamana ihany ny minisitry ny fahasalamana ny farany, ny Alahady 28 Septambra lasa teo. Mandritra izany fotoana izany, manohy ny fitadiavana hevitra hiadiana amin'ny fihanak'io aretina io hatrany ireo Jamaikanina.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/10/12/64695/
 Aretina misoko manerana an'i Karaiba: https://globalvoicesonline.org/2014/01/24/chikungunya-on-the-rise-in-the-caribbean/
 moka Aedes Aegypti: http://en.wikipedia.org/wiki/Aedes_aegypti
 tsy fahafantarana ny momba ilay aretina: http://jamaica-gleaner.com/gleaner/20140928/lead/lead1.html
 hira momba ny Tsikongonià: https://soundcloud.com/ammesha-amira-sherika-samuels/chikungunya-song-wayne-j
 fomba hanampian'ny fiovan'ny toetrandro ny fiparitahan'ilay aretina: https://twitter.com/HeatherPinnock/status/514468445694738432
 matin'ny Tsikongonià isam-paritra: https://twitter.com/LindsworthDeer/status/515593117979131904
 hisy fiatraikany eo amin'ny politikan'ny governemanta Jamaikanina: https://twitter.com/Petchary/status/517002209930665984
 Niresaka tamin'ny vahoaka: https://twitter.com/DanniellBrown1/status/516647913758662656